> Resource > Video > Si aad u isticmaasho Video Edit Magic u Mac Professional iyo Easy
Video Edit Magic waa codsi video tafatirka Windows in aad siinaysaa awood-dhamaadka sare inay taabtaan ilaa aad videos. Sidaa daraadeed, aad si fudud ku biiri kartaa, kala, dalagga, goo, midowdo aad video files, iyo sidoo kale codsan badan oo saamaynta iyo kala guurka. Si kastaba ha ahaatee, waxa kaliya ku yimaado version Windows. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad u baahan tahay ka kale Video Magic. In this article, an Video Magic u dhiganta fiican ee Mac oo buuxiya ka imaneysay iyo xirfadlayaasha labadaba waa la soo bandhigay. Taasi Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) . Hubi tutorial video ku saabsan sida loo isticmaalo Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) hore oo kale.
Download Free version jirrabaadda kuwa Video Magic u Mac:
Maxaad u dooratay Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) sida Video Magic u Mac? Halkan waxaa ku qoran sababaha.
Loo riyaaqo fudud oo si sahlan loo isticmaali
Video Edit Magic u Mac bixisaa interface la yaab leh fududahay in la isticmaalo in Waayo, mid kasta in ay soo qaado isla. Dhammaan muuqaalada tafatirka runtii soo haan iyo waqti badan ka badbaadiyay, marka aad rabto in la abuuro wax dhab ah u gaar ka badan ilaha warbaahinta.
Isticmaalayaasha ayaa Album : Abaabulaan oo dhan files warbaahinta, audio, video, audio hir iyo muujiyaan sida thumnails.
Real-time Kulanka Xiisaha Leh suuqa kala : Iyadoo shaashadda dhisay-in: mid si ku eegaan clips soo xulay, oo midba kan kale si ay u eegaan wax isku xigxiga oo dhamaystiran, si fudud u arko isbedel kasta oo codsatay in aad video.
Jiid-n-dhibic feature : Jiid jeedi wax warbaahinta files / kala guurka / horyaal / saamaynta gal waqtiga tafatir ah oo waxay urursan filim ku daqiiqo Diintooda.
Marka aad saxaafada ka qabsadeen camera ah DV, DVD fiidiyo ah, ama meel kale, waxaad kaliya dhibicda video iyo files audio gal interface Video Magic ayaa waqti-line-ku salaysan si ay u bilaabaan tafatirka.
Edit dhakhso ah oo Gaw
Video Edit Magic Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa taageeray) loogu waqtiga loogu talagalay accure iyo tafatirka deg deg ah. Liiska qalabka tafatirka faa'iido leh la gaarsiiyey inay taabtaan ilaa aad videos la qasabno yar, oo ay ku jiraan dalagga, isku shaandheyn, saamayn, kala, darsamaan, jar, filter deinterlace. saamaynta qabow, dhalaalka, bedelkeeda, iyo saturation. iyo in ka badan.
Sidaa daraadeed, aad edit karaa videos aad kasta oo aad jeceshahay, dalagga dhinac madow, ku dar music soo jeeda, labo ka mid ah saamaynta horyaalka, shaandheyn videos qaaday camera qabtay dhinac, iwm arrinta No waa video arooska, filim jacayl, sheeko safarka, documentary nolosha ama record xisbiga, waa kaliya way fududahay in la idiinku beddelin ah qiimo guriga video oo qof walba la wadaagto! Wixii faahfaahin dheeraad ah, halkan tixraac tilmaan faahfaahsan .
Share Movie Project si fudud oo dhaqso
Mid ka mid ah tallaabo dheeraad ah si ay u qabtaan baahidaada, Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) qaybsada aad masterpiece qoyskaaga, saaxiibadaa iyo xitaa dadka dunida ku baahsan! Waxaad si toos ah u gali kartaa YouTube, geli info account YouTube oo ka dhacay OK si aynu barnaamijkan xamili inta kale ee aad u
Haddii kale, waxaad dooran kartaa profiles kala duwan horena si wax soo saarka videos for ciyaaro on qalabka sida iPhone, iPad mini, Nexus 7, Madaxweyne Siilaanyo, Zune, iwm iyo in la dhiso-in DVD qalab wax gubaya kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan DVD tayo sare leh u daawanayay TV on your ciyaaryahan guriga DVD meel kasta ama.